ALIM-PIKORANANA :: Hitondra “Takariva miavaka” i Njakatiana • AoRaha
ALIM-PIKORANANA Hitondra “Takariva miavaka” i Njakatiana
Tsy mitsahatra mikaroka zava-baovao hampiavaka ny seho goavana ataony i Njakatiana mba hotsaroan’ ny mpankafy. Anisan’ny niavaka tao anatin’ny maro ny “Du jamais vu”, izay notontosainy tamin’ny 27 novambra 2009, tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina Mahamasina, ho an’izay nahatsiaro.
Fantatra izao fa haverin’i Njakatiana amina “cabaret” io endri-pampisehoana miavaka, izay hotontosaina etsy amin’ny Cemess Soa­nierana io, ny zoma 21 septambra ho avy izao manomboka amin’ny 9 ora alina. “Takariva miavaka” no niantsoany izany. Seho takariva farany hihaonany amin’ny mpankafy azy, amin’ity taona ity io, satria hiatrika fitetezam-paritra maromaro any Frantsa sy any Etazonia ity mpana­kanto ity, toy ny fanaony isan-taona.
Eo amin’ny lafiny fandaharan-kira, hiverenana avokoa ireo vazo rehetra nanamarika izay 25 taona nilomanosany tao anatin’ny mozika. Hivim­bina ny hiaka farany amin’ ireo sanganasany ihany koa
i Njakatiana, mandritra ny fiarahana. Anisan’izany “Ny ahy”, hira somary mihetsika vao nivoaka tamin’ny herinandro teo, mifanakaiky amin’ny nahafantarana azy tany amin’ny taona 90. Vazo manome tsiro sahady ny fano­manan’ny tarika ny rakikira vaovao. Amin’ny maha korana takariva ny fiarahana dia hivelatra amin’ny fianga­liana hirana mpanakanto hafa ihany i Njakatiana, na dia hibahan-toerana aza ny hirany manokana. Nampa­nantena ity mpanakanto ity fa seho raitra sy kanto, hiavaka amin’ ny haingon-tsehatra sy lafiny teknika no harosony ho an’ny mpijery, amin’io fotoana io.
Tsenaben’ny kanto Hisolo tena an’i Madagasikara any Maorisy i Ramy Rentia
Fifanakalozana Nakotrokotroka ny dihy tetsy Analakely
Kanto an-tanan-dehibe Hatao any Antsirabe ny fanapariahana ny Kolontsaina maroloko
Fanomezan-kasina mpanoratra Hanaovana hetsika fahatsiarovana Rafanoharana sy ny diam-peniny
FIRAISANKINAN’NY MPANAKANTO :: Hisy seho tolo-tanana ho an’i Fanaiky Solomiral
“ANTSIKA HISÔMA AN-DAKORO 2018” :: Manomana karazan-dalao maro ho an’ny ankizy ny IKM Antsahavola